Amasayithi Abadala Afike Kwamasayithi Aphezulu Avakashelwa Kakhulu eSingapore
Yebo, uzwe kahle. Kulula kakhulu ngathi ukusebenzisa i-Intanethi kulesi sikhathi samanje, kungaba kumakhalekhukhwini wakho noma kukhompyutha egumbini lokuphumula. Ngenxa yokwanda kokutholakala kwe-Intanethi eSingapore, inani lokuthwalwa kwewebhu eliya kumasayithi wabadala liyethusa ngokungangabazeki. Bheka amazinga we-Similarweb wezindawo ezingama-50 ezivakashelwa kakhulu eSingapore, futhi uzobona okuthile okungajwayelekile. Amasayithi we-4 wabadala noma kunalokho, amasayithi e-p * rn, akwenze kwaba uhlu lwamawebhusayithi eceleni kwama-giants afana ne-Google, Facebook ne-Yahoo. Ukube ubungazi manje, Amaphesenti angama-30 e-Intanethi kugcwele okuqukethwe kwabantu abadala.
Sihlolisise amanye amagama njengoba ephikisana nemihlahlandlela ye-webmaster yeGoogle. Kepha kufanele uhambe kahle. Akunzima kangako ukuqagela ukuthi yiliphi igama okulo.
Imfihlo Evulekile: Ngokusobala, abanye abantu baseSingapore sebevele sebeyazi ukuthi bangakwedlula kanjani ukuvinjelwa ngokushesha ngendlela esingabelana ngayo nawe (Kwembulwe engxenyeni yokugcina yalokhu okuthunyelwe ). Psst .. Akuwona ama-VPN noma ama-proxies, iqhinga elilula nje. Yabelana futhi uthande, ukuze sazi ukuthi ufuna kabi kangakanani!
Silandele ku-Facebook ngokuqukethwe okunamanzi amaningi.
Nawa amasayithi ama-4 Adult / P * rn awenze ohlwini okwamanje:
• I-Tumblr (19) (ukusetshenziswa kwe-2nd okudume kakhulu kwe-Tumblr okuqukethwe kwabantu abadala)
Ama-X * amavidiyo (21)
Xh * inkungu (23)
P * rnhub (33)
Njengoba abanye benu bengazi (Ubungazi kanjani empeleni?), Amanye ala masayithi avinjelwe Imininingwane yezokuxhumana Abezokuthuthukiswa Kwabezindaba baseSingapore ( IMDA ).
A ukuhlaziywa okuqhubekayo yalezi zibalo zenziwa ekugcineni kwalesi sihloko.
Amagama angukhiye aphezulu aseshwe ama-5 (Ngaphandle kwamasayithi abantu abadala): ISingaporean P * rn, iSingapore JC Girl Bl * wjob, iSingapore P * rn Tumblr, Singapore P * rn, Singapore P * rn Sites
I-athikili Entsha Ehlobene: Izikhathi Ezithandwayo AmaSingapore Afuna iSingapore P * rn?
I-P * rn ngokuqinisekile ayinciki kuzingxenyekazi zeSocial Media njengendlela yomthombo wethrafikhi, ngokungafani namawebhusayithi ajwayelekile. Ukufakazela lesi sitatimende, i-P * rnHub isanda kubangela ukwethuka emhlabeni wonke futhi yethusa bonke abasebenzisi bayo ngalo April Fool. Isayithi elihamba phambili le-p * rn lafeza i-prank enkulu ngokukhohlisa abasebenzisi bayo ukuthi bacabange ukuthi banike amandla ukwabelana ngamavidiyo okuzenzakalelayo kuwo wonke ama-akhawunti abo omphakathi. Ukumangalela lesi sici esisha ngokuthi “inguquko,” abasebenzisi bakhishwa ngobuqili kepha baqinisekiswa ngokushesha yi-P * rnHub ukuthi ukuphequlula kwabo kuzohlala kuphephile futhi kuvikelekile ngemigomo yokubethela kanye ne-HTTPS. Idlalwe kahle i-P * rnHub.
Manje bakwenze kanjani lokho?
Futhi, sisebenzisa i-P * rnHub ekuhlaziyeni kwethu sicabanga ukuthi isitholile isikhundla se- # 21, sizokwenza ukwehlukaniswa kwemithombo yaso yomgwaqo.
Nge-oda yevolumu yethrafikhi:
Ngqo (39.49%) – Ingahlukaniswa ngokwengeziwe ngokushaywa okuqondile futhi umphakathi omnyama ithrafikhi. Leli qembu lezimoto ngokuvamile liqukethe izivakashi eziphindaphindayo neziqotho. Ukulutha umlutha kungaba enye yama-cliche kepha izithako ezibalulekile ekukhiqizeni ithrafikhi yewebhu engaka kumasayithi abantu abadala kanye ne-p * rn.
Sesha (32.97%) – Kungaba ukuvilapha ukuthayipha i-URL ephelele kubha yekheli noma ukulahleka kwenkumbulo okungazelelwe, ithrafikhi yokusesha ngokungangabazeki ingumthombo oyinhloko wethrafikhi wanoma iyiphi iwebhusayithi, noma i-P * rnHub. Kodwa-ke, okuthusa kakhulu ukuthi ithrafikhi yokusesha iqukethe nezivakashi ezisanda kuvezwa ku-p * rnography, noma ezingayazi i-P * rnHub nhlobo ngaphambi kokuyicwaninga. Emagameni wokusesha we-organic organic ayi-15,161, i- “P * rn” isendaweni yesibili ohlwini olunezinga elingu-9% lomthamo wosesho ophelele. Njengoba kushiwo ngaphambili, abasebenzisi bafuna amanye amagama asemqoka afana ne-Singaporean P * rn, Singapore JC Girl Bl * wjob, Singaporean P * rn Tumblr, Singapore P * rn, Singapore P * rn Sites futhi.
Izixhumanisi (23.05%) – Ithrafikhi ebidluliselwe ivela kwamanye amawebhusayithi, ikakhulukazi amanye amawebhusayithi e-p * rn / yabantu abadala nezinkomba.
Ezomphakathi (3.54%) – Akuyona into emangazayo. Kodwa-ke, ipulatifomu ehamba phambili yezenhlalo yeP * rnHub yiReddit, hhayi i-Facebook (3rd ohlwini).
Izikhangiso (0.72%) – Umthombo omncane kodwa obalulekile wethrafikhi. Leli iqhinga lokuheha izivakashi ezintsha nezingaqaphile eP * rn.
Imeyili (0.24%) – Okokugcina kodwa nakancane, izincwadi zezindaba beziyindlela yokuphromotha esebenzayo kumasayithi amaningi kusukela ezinsukwini ezinhle zakudala. Kodwa-ke, esingakutholi okuqukethwe yilezi zincwadi zezindaba.
Iqiniso Elimnandi: Izivakashi zesifazane bezilokhu zanda, okungenani IYurophu ne-United States . Isabelo sabesifazane sethrafikhi ngokuvamile sihluka kusuka ku-20-30%, kuya ngezwe.
Ibhonasi – Ukukhohlisa okulula
Amasayithi avakashelwe kakhulu wokuqukethwe okuphangiwe eSingapore:
Kuyabonakala futhi ukuthi kukhona ukuhlangana okuhle okuqinile phakathi kwamasayithi abantu abadala nokuqukethwe okuphangiwe. Njengoba kubonakala esigabeni sabancintisana nakwamanye amasayithi afanayo ale mibiko eningiliziwe yamasayithi, amasayithi wokuqukethwe abaphangi abhalwe kaningi phezulu kwamazinga.
• I-Mangafox (29)
• ama-gomovies (20)
• UKissanime (46)
• IBaidu (22) ?? Linda, abantu basasebenzisa i-Baidu ukulanda umculo wamahhala? Noma ingabe i-Wikipedia nje yamaShayina ahlala lapha?
• thepiratebay.org (49) Ngenxa yalokhu, iSingapore kubekwe # 9 maqondana nobugebengu be-inthanethi ngo-2016.
* Izikhundla zibhalwe endaweni yokuthunyelwe. Ngakho-ke, ngokungangabazeki zizoshintsha njalo ngezikhathi ezithile.
Ngaphezu kwakho konke, ngisho neThe Straits Times, ebekwe ku-28, ayikwazanga ukuncintisana nomgwaqo oya kumasayithi wabadala. Ungahlola okunye ukukala ku-Similarweb. Ngabe ukuvinjelwa eSingapore sekungasasebenzi? Ngabe uhulumeni uzosukuma aqinise isandla sakhe kulawa mawebhusayithi? Yabelana futhi udalule abangane bakho! Khumbula ukusilandela ku-Facebook!
Isigaba Esisha Sabantu Abadala Esihlobene: Izikhathi Ezithandwayo AmaSingapore afuna i-P * rn? (Amagama angukhiye afaka i-Singaporean P * rn njll.)
Kubukeka sengathi usesekhona, kungani ungahloli ukuhlaziywa okuningiliziwe kokuthi i-Circles.Life ikusebenzise kanjani futhi yaqala ibhizinisi labo?
Ividiyo Yesingeniso ye-IMDA:
• ICringe Fest: I-SGCL 2017 B Division (League of Legends)
• Izinhlobo ze-NSF eSingapore (National Service)
• Izingoma ezingama-222 zesiShayina Sonke Sithanda Ukulalela (uchungechunge olunezingxenye ezimbili)
• Izikhathi Ezithandwayo AmaSingapore afuna i-P * rn?
Home » Uncategorized @zu » Amasayithi Abadala Afike Kwamasayithi Aphezulu Avakashelwa Kakhulu eSingapore